Momba anay - Zall International Trade Group Limited
Annecy Studio dia marika famokarana miaraka amina varotra / famolavolana ary famokarana amin'ny akanjo, ary an'ny bandy an'ny vondrona varotra Zall International voafetra. Ny anarany dia niandoha tao amin'ny tanànan'ny Annecy tsara tarehy sy falifaly. Tanora maromaro no nianatra sy nonina tany Frantsa indray mandeha ary tena nanintona ny hakanton'i Annecy, namela fahatsiarovana lalina sy fotoam-pifaliana. Rehefa niverina nody izy ireo dia nahatsapa fa afaka nanao zavatra misy dikany kokoa, ary niditra ho mpikambana ao amin'ny vondrona varotra Zall International voafetra ary nanangana ny tarika Annecy Studio natokana ho an'ny famolavolana / varotra ary ny famokarana amin'ny karazana palitao, akanjo ivelany, akanjo fitondra amin'ny lanezy, pataloha, short, lobaka sy ny sisa, manantena ny hitondra hatsarana sy fahasambarana ho an'ny olona manerana an'izao tontolo izao.
Voafetra ny vondrona mpivarotra Zalll Iraisam-pirenena, tompon'ny orinasa ambony 100 voatanisa ao amin'ny birao (02098.hk) any Hong Kong, sampana iray an'ny Zall Smart Group. Izy io no orinasa tsy miankina lehibe indrindra any amin'ny faritanin'i Hubei, sehatra varotra nomerika, fandrakofana eo amin'ny sehatry ny fandraharahana: varotra fanafarana sy fanondranana, fanamboarana fiaramanidina, seranan-tsambo, banky, baolina kitra, sns.
Miaraka amin'ny fahamendrehana, ny firaisankina ary ny endrika vaovao, dia mamokatra ho an'ny vokatra avo lenta marika OEM any amin'ny firenena mandroso any Eropa sy Etazonia izahay. Ary ampanjifaina ihany koa ny famokarana ODM ho an'ny mpanjifa kely, salantsalany ary lehibe maro. Mpanjifa maro no manana fiaraha-miasa ara-barotra maharitra sy maharitra miaraka amin'ny orinasanay.
Ny mpiasa matihanina amin'ny famolavolana sy ny famokarana, mifantoka amin'ny kalitao, mitazona ny teny fikasana, ary manome serivisy avo lenta ny mpanjifa ho valiny mahomby sy haingana. Ary manana ekipa matanjaka izahay misy ny mpamorona, ny mariky ny maodely ary ny marika santionany hanampy anao hampivelatra vokatra vaovao. Mandritra izany fotoana izany dia hanatrika ny seho varotra lamba any Shanghai, Shenzhen, Guangzhou izahay mba hahazo filamatra bebe kokoa amin'ny loharano ary hampivelatra lamba sy fomba vaovao.
Izahay koa dia manana fizaham-pitsaboana vokatra feno, avy amin'ny fanaraha-maso ara-pitaovana, fanaraha-maso ny tontonana, fanaraha-maso ny vokatra efa vita, fanaraha-maso ny vokatra vita, fanaraha-maso fonosana. Ny rehetra dia tokony hiantohana ny kalitaon'ny vokatra, mba hifehezana ny kalitao amin'ny dingana rehetra.
Manana ekipa matihanina ihany koa izahay, manam-pahaizana manokana amin'ny fanatsarana ny rojom-panomezana, mifampiraharaha amin'ny fikosoham-bary sy ny mpamatsy, ary manao ny vahaolana mety indrindra hitazomana ny kalitao, ny fotoana fandefasana ary ny vidiny mirary. Na dia manolo-tena hanompo ny mpanjifa aza izy ho fototra, hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa mitohy, hanampiana ny mpanjifa hampihena ny vidiny, ary hanome ny kalitao, serivisy ary vidiny mifaninana tsara indrindra.
l Manangona sy mamakafaka ny mombamomba ny traikefan'ny mpanjifa
Amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny varotra sy ny serivisy mpiasan'ny serivisy, hahazoana vaovao momba ny traikefa ilaina amin'ny mpanjifa amin'ny fanatsarana ny vokatra
Mifantoha amin'ny fironana indostrialy, miziriziry mifantoka amin'ny tsena hampivelatra sy hikaroka vokatra vaovao
Hatsarao ny fitarihan'ny toetra mampiavaka ny vokatra
Mifantoha hatrany amin'ny fanatsarana ny toetran'ny vokatra sy ny tombony amin'ny tsenan'ny fizarazarana, mihoatra ny fanantenan'ny mpanjifanay.
Hatsarao ny kalitaon'ny vokatra namboarina
l amin'ny alàlan'ny famakafakana ny traikefan'ny mpampiasa ny namany, hanatsarana ny fahombiazan'ny vokatra sy ny asany.
Angony sy hadihadio ny fangatahan'ny mpanjifa
Mifandray amin'ny mpanjifanay izahay mba hanome vahaolana vokatra tsara.
Fanaterana vokatra feno
Mba hamenoana ny famokarana, fandefasana ao anatin'ny fotoana voafaritra, avelao ny mpanjifa ho feno ahiahy.
Haavo avo lenta amin'ny famokarana mazava tsara, hanomezana vokatra sy vahaolana avo lenta an'ny mpanjifa.
Mitady asa miaraka aminao izahay, tongasoa anao hifandray aminay, hiezaka mafy izahay mba hanomezana anao ny vokatra tsara azo antoka sy azo antoka ary mahafa-po! Manantena izahay fa afaka manana fotoana hiara-hiasa amin'ny marikao indray andro any, handroso ny orinasanao ary hahazo Win-Win Situation!
adiresyN0. Lalana 3-106 HanKouBei, Faritra fampandrosoana any Panlong, faritany HuangPi, Wuhan Sina.